Umaki: abm | Martech Zone
Ama-akhawunti awathathi izinqumo, abantu bayazenza. Uhlelo oluyimpumelelo lwe-Akhawunti olususelwe ku-Akhawunti (i-ABM) lulandela ama-akhawunti ezingeni lamasu kepha lukhuluma nabantu abasezingeni lokusebenzisa. I-Influ2 ichaza lokhu njengohlelo lwe-ABM olunokulungiswa okuphezulu lapho izici ezibalulekile zifaka phakathi: Shayela eqenjini elithengayo. Dlulela ngale kokukhetha ama-akhawunti ahlosiwe: cwaninga abenzi bezinqumo abathile abandakanya amaqembu wokuthenga ama-akhawunti wakho oqondisiwe. Bheka kwincazelo eqhubekayo ye-ICP yakho ukuhlanganisa uhlu lwabenza izinqumo
ULwesithathu, May 8, 2019 UMsombuluko, May 6, 2019 Douglas Karr
Ukuthengwa kwe-B2B sekuguqukile - abathengi banamuhla abadalulwanga, abahlukanisiwe futhi abameleki. Imizamo ye-B2B yokuThengisa nokuMaketha iyaqhubeka ukungasebenzi ngempumelelo njengoba amaqembu enza imali elwela ukunqwabelana okuhlala kuncipha kwamakhasimende namathemba endaweni esivele igcwele ngokweqile futhi iya ngokuya iba nomsindo. Ukuncintisana nokunqoba namuhla, amaqembu engenayo e-B2B adinga ukuguqula indlela yabo ukuze ahambisane nezidingo zabathengi banamuhla be-B2B. Emvelweni wokuthenga we-B2B wanamuhla, abathengi yilawa: Anonymous - In